Aiza ianao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Aiza ianao?
Fotoana fohy taorian’ny Fahalavoana dia niafina tao amin’ny faritry ny saha Edena i Adama sy i Eva. Mampihomehy ny nampiasan’izy ireo ny zavaboarin’Andriamanitra, ny zavamaniry sy ny biby, mba hiafina amin’Andriamanitra. Izany dia mametraka ny fanontaniana voalohany napetraka ho toy ny fanontaniana ao amin'ny Testamenta Taloha - avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpanota izany, (Adama): «Ary nandre an'Andriamanitra Tompo nandeha teo amin'ny saha izy ireo, rehefa nangatsiaka ny andro. Ary Adama sy ny vadiny niafina tao amin' ny hazo tao amin' ny saha mba tsy ho hitan' ny Tompo Andriamanitra. Ary Jehovah Andriamanitra niantso an’i Adama ka nanao taminy hoe: Aiza ianao? (1. Mosesy 3,8- iray).
"Aiza ianao?" Mazava ho azy fa fantatr'Andriamanitra hoe aiza i Adama, inona no nataony ary inona ny toe-javatra misy azy. Ny fanontaniana ampiasain'Andriamanitra amin'ity fizarana ity dia manaporofo fa tsy mitady fanazavana izay efa fantatra taminy Andriamanitra fa nangataka an'i Adama hizaha toetra ny tenany.
Aiza ianao izao eo amin'ny tontolo ara-panahy sy amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Aiza ny fiainana mitondra anao izao? Tamin'ny vanim-potoana misy azy izao dia tamin'ny fikomiana izy, natahotra ilay karazana tahotra, niafina tamin'Andriamanitra, ary nanome tsiny ny hafa noho ny fitondran-tenany. Famaritana ankapobeny io dia tsy an'i Adama ihany, fa an'ny taranany koa mandraka ankehitriny.
Na i Adama sy i Eva dia samy nandray an-tanana ny raharaha. Mba tsy hahatsiaro tena ratsy eo anatrehan'Andriamanitra, dia nanarona ravina tamin'ny tenany izy ireo. Io akanjo io dia tsy mety. Nanamboatra fitafiana tamin'ny hoditry ny biby Andriamanitra. Toa ny sorona biby voalohany sy ny fandatsahan-dra tsy manan-tsiny, ary ny fahatongavan'izay ho avy.
Io fanontaniana io dia mety ho an'ny Kristianina koa satria tsy voaro amin'ny toetry ny olombelona izy ireo. Nanandrana nanjaitra ny akanjony ny sasany mba hahatsiaro ho voasarona eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fanarahana fombafomba, fombafomba, fitsipika ary fitsipika. Ny valin’ny filan’ny olombelona anefa dia tsy miankina amin’ny fanao toy izany, fa tafiditra ao anatin’ny fanontaniana voalohany apetraky ny mpanota hendry ao amin’ny Testamenta Vaovao eo ambany fitarihan’Andriamanitra manao hoe: “Aiza ilay Mpanjakan’ny Jiosy vao teraka? Efa hitanay niposaka ny kintanany ka tonga hiankohoka eo anatrehany izahay » (Mat 2,2).
Amin’ny alalan’ny fanekena sy fanompoam-pivavahana amin’ilay mpanjaka nomena ny fanjakana hatry ny fony vao teraka, dia izao no omen’Andriamanitra fitafiana ilaina: “Fa ianareo rehetra izay natao batisa ho an’i Kristy dia nitafy an’i Kristy” (Galatiana). 3,27). Ho solon'ny volon'ny biby, dia itafio ny Adama faharoa ao amin'i Kristy, izay manome anao fiadanana, fankasitrahana, famelan-keloka, fitiavana ary trano fandraisam-bahiny. Izany no filazantsara raha fintinina.